Tacsi: Dr. Ahmed Yusuf Fareh
Gudoomiyaha ururka isbaheysiga ummadda somaliyeed ee Sweden iyo dhamman xubnaha gudiga fulinta ee ururku waxey tacsi u dirayaan qoyskii uu ka tegey allaha u naxariistee Dr.Ahmed Yusuf Fareh oo bishan 12keedii ku geeriyoodey magaaladda Nairobi.
Dr.Ahmed Yusuf wuxu bishii juuni ee sanadkan jimid dalkan Sweden si uu uga qeyb galo shir ay qaban qabiyeen haydaha qoxootiyada ee wadamada skandinavianku kasoo looga hadlaayey arimo muhiim u ah dadka somaliyeed.
Dr. Ahmed Yusuf Fareh wuxuu ahaa nin Somali dhaba waqtigan badanna ku lumiyey sidii xal cilmiyeysan loogu heli arimaha murugsan haysta ummadda somaliyeed.
Dr. Ahmed wuxu ahaa dadka fara ku tiriska ee aqoon heer sara ah gaadhey dhimashadiisuna waa dhaawac weyn oo soo gaadhey aqoonyahanka somaliyeed iyo ummadda somaliyeed oo dhanba. Wuxu ahaa nin qofkii la kulmiba jecleysto saaxiiba badanna leh.
Ururka isbaaheysiga ummadda somaliyeed ee Sweden wuxu ilaahey uga baryayaa inuu dhammaanteen samir iyo iimaan inaga siiyo isagana janadii farduusa ka waraabiyo.
Yacquub Aden Abdi
Gudoomiyaha ururka isbaaheysiga ummadda somaliyeed, Sweden.
Qoraalkan kala xiriir: guledhakim@yahoo.com
FAAFIN: August 22, 2002 | SOMALITALK.COM
Midowga Ardayda Soomaalida Minnesota
oo soo abaabuley shir ballaaran oo wax loogu qabanayo waxbarashada dalkeena hooyo GUJI Agosto 14
Warbixin dheer oo Ibraahim Saalax kasoo diyaariyey dhibaatooyinka lasoo gudboonaadey Soomaalida u qaxday dalka Ingiriiska ayaa kubilaabatay.. GUJI.. Agosto